Guddiga Doorashada Puntland oo tartan la'aan Muqdisho ku doortay Guddoomiye iyo ku xigeen (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xubnaha Guddiga maamulaya doorashada maamulka Puntland oo ka kooban 11 xubmood ayaa maanta magaalada Muqdisho ku doortay Guddoomiye iyo ku xigeen.
Guddigan oo ku shiray Hotelka Peace 1 ee ku dhow Garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa kulanjooda soo xaadiray dhammaan 11-ka xubnood ee uu ka kooban yahay, waxaana xilka Gudoomiyaha waxa isku soo sharaxay hal musharax oo aanay jirin cid la tartantay.
Xubnaha Guddiga Doorashada Puntalnd ayaa C/kariim Muuse Maxamed ayaa codadkii oo dhan ee Gudiga ku guuleystay, waxaana uu helay 11-kii Cod oo loogu soo xulay xilka.
Xilka gudoomiye ku xigeenka waxa isku sharaxay: Caynaanshe Yuusuf Xuseen, iyadoo sidoo kale aanay cidna kula tartamin jagaadan, wuxuuna helay 11 Cod.
Tartan la’aan ayaa Gudoomiyaha Guddiga Maamulka doorasha ee Heer Dowlad goboleed ee Puntland loo doortay C/kariim muse Maxamed, iyo guddoomiye ku xigeenka Caynaanshe Yuusuf.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo dalbaday in Farmaajo laga joojiyo inuu mar kale xil Qaran isu sharxo (Akhriso)
Next articleGuddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada oo doortay Guddoomiye iyo ku-xigeen (Yaa kusoo baxay?)